Olee Ụdị Onye Chineke Bụ? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mizo Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Otetela Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Chineke bụ mmụọ. Mmadụ enweghị ike ịhụ ya anya. Ọ bụ ya kere eluigwe, ụwa, na ihe niile dị ndụ. Ma, o nweghị onye kere Chineke n’ihi na o nweghị mmalite. (Abụ Ọma 90:2) Chineke chọrọ ka ụmụ mmadụ gbalịa ka ha na ya dịrị ná mma nakwa ka ha mata nke bụ́ eziokwu gbasara ya.—Gụọ Ọrụ Ndịozi 17:24-27.
Anyị nwere ike ịmata aha Chineke. Anyị nwekwara ike ịmata àgwà ya ụfọdụ ma ọ bụrụ na anyị echebara ihe ndị o kere eke echiche. (Ndị Rom 1:20) Ma, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata Chineke nke ọma, ihe anyị kwesịrị ime bụ ịmụ Okwu ya, bụ́ Baịbụl. Baịbụl ga-eme ka anyị mata àgwà ọma ndị Chineke nwere.—Gụọ Abụ Ọma 103:7-10.
Mmegbu ndị mmadụ na-emegbu ibe ha ọ̀ na-ewute Chineke?
Mmegbu ndị mmadụ na-emegbu ibe ha na-ewute Onye kere anyị, bụ́ Jehova. O kere ụmụ mmadụ n’onyinyo ya. (Diuterọnọmi 25:16) Ọ bụ ya mere mmegbu anaghị adị ọtụtụ ndị mma. Ọ bụghị Chineke kpatara mmegbu ma ọ bụ ihe ọjọọ anyị na-ahụ ebe niile. Chineke kere ụmụ mmadụ ka ha na-ekpebiri onwe ha ihe ha chọrọ ime. Ma, ọ dị mwute na ọtụtụ ndị họọrọ ime ihe ọjọọ ma na-emegbu ndị ọzọ. Ihe ọjọọ ndị ha na-eme ‘na-ewute Jehova n’obi.’—Gụọ Jenesis 6:5, 6; Diuterọnọmi 32:4, 5.
Jehova hụrụ ikpe ziri ezi n’anya. Ọ gaghị ekwe ka mmegbu dịgide. (Abụ Ọma 37:28, 29) Baịbụl gwara anyị na Chineke ga-eme ka mmegbu niile ndị mmadụ na-emegbu ibe ha kwụsị n’oge na-adịghị anya.—Gụọ 2 Pita 3:7-9, 13.
Baịbụl gwara anyị na Chineke ga-eme ka mmegbu niile ndị mmadụ na-emegbu ibe ha kwụsị n’oge na-adịghị anya
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Jenụwarị 2014 | Ọ Bụrụ na Mmadụ Anwụọ, nke Ya Ọ̀ Gaala?